Gems na Jewelry Industries nke Dubai - Ụdị na Business Business
Gems na Jewelry Industries nke Dubai
Onye nleta nleta na Budget Friendly Dubai
Ịdị ndụ na United Arab Emirates - Ọ bara uru ịhọrọ?
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at Nwere ike 15, 2019
Gems na Jewelry Industries nke Dubai - Nduzi na Dubai City Company
Bara nnukwu uru na ụlọ ọrụ ọla nke Dubai. Ọfọn, Dubai bụ obodo mara mma na obodo zuru ụwa ọnụ nke Middle East. Ọ na-ejidekwa ihe dị mkpa ebe n'ọdụ ụgbọ njem zuru ụwa ọnụ maka ndị njem na ibu. Mmanụ bụ ihe bụ isi ego na ya ma ọ na - enyere aka ime ngwa ngwa obodo. Nke bụbu nnukwu ebe nchekwa mkpụrụ, mana Dubai nke ụlọ ọrụ bara nnukwu uru na ụdị ịchọ mma na-ejikwakwa ebe dị mkpa na nnata.
Ihe ịchọ mma niile azụmahịa azụtala ihe site na ọnụ ahịa ọla edo na-agbanwe agbanwe na afọ na nnukwu ihe ndị ahịa chọrọ. Ntinye nke 5% VAT na ihe eji achọ mma tinyekwara ibu dị arọ nke ọnụ ahịa. Ma, ka, ndị mmadụ Dubai ịhụnanya ọla na nkume dị egwu.
Isi Iyi: http://gulftomorrow.com/dubais-gems-education-said-to-offer-for-best-saudi-school-chain/
Ekike ejiji Dubai gbara akaebe mpaghara siri ike e jiri ya tụnyere ezigbo ịchọ mma n'ihi ọnụahịa ya dị ala. Isi nkume dị oké ọnụ ahịa na nke dị oké ọnụ ahịa na-arụkwa ọrụ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ bara nnukwu uru na ụlọ ịchọ mma nke Dubai. Turquoise a na-ewere ya dị ka nkume dị nsọ na Islam, ọ na-egosikwa ịma mma mara mma ma ọ bụrụ na ọ na-amụba na mgbaaka na necklaces.
Turquoise a na-ejikwa ya na-ebute uche n'uche. Ruby gemstone na - ebukwa ezigbo mkpa n’ime Islam. N'ime akwa ejiji dị oke ọnụ, ihe ndị bụ isi e ji bịa bụ Aldo ngwa mma. Dịka ọmụmaatụ, Mango, yana, Zara na H&M. Ọdịmma, onyinye ndị a na uwe ejiji agwakọta, nke a na-ekwu n’ogologo, ihe ịchọ mma e ji ọla edo mee na-adịru ogologo. Ha nyekwaara aka obere ihe na-adịghị mma maka uto maka ihe ndị eji achọ mma. Dubai bu ezigbo mmanu.
Nkwalite ihe ejiji maka imetụta ahịa
A haziri ihe omume dịka Dubai Ugbo ala di iche iche iji nye onyinye ndi puru iche. Ọzọkwa, na-eme nke ahụ nye aka n'ịzụlite mmata na akwalite ahia. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere ịhụnanya dị ukwuu maka ịchọ mma na nkume dị egwu ma na-eche maka ihe omume ndị a maka ịzụta ha.
Onyinye nke ndi isi ochichi di ike n'etu mma
Onyinye nke ndi ndu ime obodo siri ike na-ebute ndu. Damas bụ onye ndu kachasị nke ihe ịchọ mma nke Joyalukkas Holdings, Malabar Group na Richemont (Dubai) sochiri. Damaskọs nwere ezigbo mma ọ na-enwe ezigbo aha maka ịdị mma ya na nke ya Ihe nketa Emirati, na mgbakwunye na arịrịọ mba ụwa na ama na nkwado.
Dubai na Gold
'Slọ ahịa na-ere ahịa achọ mma na Dubai nwere mkpokọta Ndị otu mba 180 bi na Dubai. A na-ebubata ya ịchọ mma site na mba 30 niile si otú a na-egbo mkpa sitere ndị njem zuru ụwa ọnụ na-aga Dubai. A na-ere ọla dị mma nke Dubai na 18K, 21K, 22K ruo 24K iji gboo mkpa nke mpaghara ọ bụla n'ụwa.
Ebe E Si Nweta: https://www.novotel-dubai-world-trade-centre.com/sites-attractions/shopping-in-dubai/dubai-gold-souk/
Ahịa Dubai nwere ọtụtụ ihe ịchọ mma dịka ụtọ na nhọrọ masịrị gị. Thelọ nnukwu ụlọ ahịa ahụ Dubai nwere ụfọdụ n'ime ihe ịchọ mma kachasị mma n'ụwa. The UAE ahịa na-enye nhọrọ zuru oke nke ịchọ mma emere na 14K na 22K.
Ụdị ọla edo na ọla
Nnukwu ọnụ ahịa nke ndị na-eri ihe maka ahia UAE bu ndi Esia, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa site na mpaghara ndị India. Diwali bụ ememme dị mkpa maka ndị India na ọtụtụ Indian obodo ọ bụ ihe dị egwu ịzụta ọla edo. Omenala ọla edo na ọla ịchọ mma nke ọla edo chọrọ nnukwu oge a.
Ịzụta ihe dị na diamonds na Dubai
diamond a na-ahụta dị ka otu n'ime nkume dị oké ọnụ ahịa na-achọsi ike maka emume ọ bụla. Ndị ahịa na-ahụ maka ọrụ teknụzụ nke diamonds na gemstones ma ha zụrụ maka ego yana maka ihe ịchọ mma nke diamonds. Ebe etiti Dubai ulo oru ihe ndozi nwere ihe omumu ihe nile di iche iche na okwute. Diamọnk Herkimer bụkwa ọtụtụ diamond nke enwere ike iji rụọ ya bụ ụdị ọmarịcha ọla na pendants.
Ndị otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkume zuru ụwa ọnụ na-enwe nzukọ na Dubai iji dozie nchegbu ngwa ngwa maka usoro ihe onwunwe dị egwu n'etiti usoro mgbasa ozi roller-coaster. Ihe ngosi nke ụbọchị atọ nke International Colored Gemstone Association (ICA) na Dubai Multi-Commodities Center (DMCC) mere mgbalị iji guzobe ahịa ahịa dị mma na Dubai maka ịzụlite akụrụngwa na ụlọ ọrụ.
Mana enwere ọtụtụ nsogbu ị ga - agafe tupu Dubai ewepụta nke DMC nwere ike ịtụ anya. Nke mbu, ụlọ ọrụ bara nnukwu uru na-ebute nnukwu nsogbu n'ihi n imomi ọ ,ụ, nnọchi na nkwalite. Dingka akara na ịnye ọnụahịa dịkwa nhịahụ na ọ na-achọ ahụmịhe ụlọ ọrụ. Dubai na-echekwa okwu gbasara ịzụ ahịa na-akpata nsogbu n'ike azụmahịa ya na ndị egwuregwu mba ụwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị dị iche iche dị iche iche gaa na ebe a.
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo ọrụ nduzi na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.